SuperOneClick ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ Androidsis
သင်၏ Android terminal ကို SuperOneClick ဖြင့် root လုပ်နည်း
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, လဲ tutorial
နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့မင်းကိုပြမယ်။ SuperOneClick ၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီဖြင့်အတွက်အစီအစဉ် Windows ကို y Android terminal တော်တော်များများအတွက်တရားဝင်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး root လုပ်နည်းနှင့် Android operating system ဖြင့်သင်၏ terminal ကိုကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နည်း။
ဒီပရိုဂရမ်ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာ၎င်းသည် open source ပရိုဂရမ်တစ်ခု (သို့) ခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်, နှင့်အတူကျနော်တို့အဆုံးမဲ့အရေအတွက်ကအမြစ်တွယ်နိုင်အမြန်ဆုံး။
အမြစ် နည်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်ရှိဖိုင်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်နှင့် terminal ၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်စနစ်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုမည့် system tools များကျွန်ုပ်တို့၏ Terminal တွင်နေရာယူသောသာမန် ROM များမှ system applications များကိုဖျက်ပါ။
2 SuperOneClick ကို သုံး၍ သင်၏ terminal ကို root လုပ်နည်း
စာရင်း သဟဇာတ devices များ ဖြစ်ရန် အမြစ်တွယ် ဖြတ်. SuperoneClick၊ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်၊ ကြီးထွားမှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ၊ သင်၏ကိရိယာနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိသိရန်အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ terminal တွင်မမှန်ပါကလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအမှားအယွင်းတစ်ခုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏ terminal သည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမခံစားရပါ။
SuperOneClick ကို သုံး၍ သင်၏ terminal ကို root လုပ်နည်း
ဤပရိုဂရမ်သည်ဗားရှင်းအားလုံးအတွက်တရားဝင်သည် Windows ကို, သင်ရုံမှန်ကန်စွာ install လုပ်ဖို့ရှိသည် Microsoft .NET Framework 2.0ပရိုဂရမ်၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ချုံ့ထားသောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ၊ စာရေးခုံ ကျွန်တော်တို့၏ Windows ကို, ငါတို့ folder ကိုရိုက်ထည့်နှင့်ဖိုင် execute ပါလိမ့်မယ် SuperOneClick.exe.
ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်ကိရိယာကိုသာဆက်သွယ်ရတော့မည် အမြစ်, ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးငါတို့၌ရှိကြောင်းစစ်ဆေးရပေမည် USB debugging settings, applications များ, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ menu ကနေ activated ။
ကိရိယာချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်ထို box ကိုခေါ်ပါလိမ့်မည် exploit option ကိုရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည် "Universal".
ယခုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ အမြစ် ပရိုဂရမ်ရဲ့ထိပ်ကနေ၊ စောင့်ပါ SuperOneClick မင်းအလုပ်ပြီးပြီ
အကယ်၍ လုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်ကြိမ်ပြီးဆုံးပါကမည်သည့်အမှားအမျိုးအစားကိုမျှမဖော်ပြပါကကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည်သဟဇာတဖြစ်မည်ဟုဆိုလိုသည် Rootingအဲဒါကိုစစ်ဆေးဖို့ငါတို့ဖွင့်ရမယ် app အံဆွဲ နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ application အသစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် စူပါအသုံးပြုသူ.
ငါတို့လိုချင်ရင် Un-root ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကို, ငါတို့ကဆိုတဲ့မေးခွန်းကို device ကိုချိတ်ဆက်မယ်လို့ကျနော်တို့က option ကိုသာကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည် ဖျက်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - DX Battery Booster, သင့်ဘက်ထရီကိုထိန်းချုပ်ပါ
ဒေါင်းလုပ် - SuperOneClick
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android Root ပါ » သင်၏ Android terminal ကို SuperOneClick ဖြင့် root လုပ်နည်း
188 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Haber, ပရိုဂရမ်ဖန်တီးသူများ၏အဆိုအရသင်သည် UnRoot ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပြီးပြန်သွားနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားခဲ့ပါ။
ငါ၏အ xperia ကစားအဆင့်7မှာရှိနေမည်
xperia play r800at version 2.3.3 ဆိုတာဘာလဲ
SuperOneClick သည်ဗိုင်းရပ်စ်များမပါဝင်ဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ ... ဤစာမျက်နှာရှိ link သည်အမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် root ဖြစ်ပါက terminal ကို unroot လုပ်ရန်ဤ program ကိုသုံးနိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကျရှုံးနိုင်တယ်။
terminal ကိုပျက်စီးခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ အလုပ်မလုပ်ပါကသင့်အားအမှားအယွင်းအချို့ပေးလိမ့်မည်။
သတိပြုပါ၊ သင်ထည့်ထားသောဇစ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များ / malware များရှိသည်။ ကျွန်တော့် nod32 ခုန်တက်သွားပါတယ်
၎င်းတွင်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မျှမရှိပါ။ nod32 သည်ခုန်။ ထုံးစံရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်တွေအကြောင်းငါ့ကိုမပြောပါဘူး။ Ami ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် root လုပ်တာနည်းနည်းနည်းလာရင် program ကမတုံ့ပြန်ဘူး၊
ကျွန်ုပ်တွင် xperia arc ရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဤအစီအစဉ်နှင့်မကိုက်ညီပါကကျွန်ုပ်မသိပါ
အဘယ်ကြောင့်ပရိုဂရမ်ကိုတုံ့ပြန်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်လာသနည်း ငါ့မှာ motorola လိုအင်ရှိတယ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် program ကို run ပါ။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မှာ samsung galaxy s2 ရှိတယ်၊ ပရိုဂရမ်ကိုဆွဲချတယ်။ ဒါပေမယ့် exploit tab ထဲမှာ universal option မရှိဘူး။ auto၊ တခြားဘာမှမရှိဘူး။ auto နဲ့ root လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့၊ ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ window ထဲမှာရောက်နေတယ်။ တယ်လီဖုန်းကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ဆိုသည်ကိုပြောပြသည်။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိ။ ဒါကိုပြင်လို့ရပါတယ် ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်မှာ ၀ င်းဒိုး ၇ ရှိတယ်ဆိုတာပြောဖို့မေ့နေတယ်။
ငါ "Universal" မှ exploit option ကိုမရပါ။ admin ကို program အဖြစ်ဖွင့်သည်။ ဘာမှားလဲ
SuperOneClick ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးပါပြီ။ Eset Nod 32 က "မျိုးစုံခြိမ်းခြောက်မှုများ" အတွက်၎င်းကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်
သူ့ကိုဘာမှမဖြစ်သည့်ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ။ Esen ကသူ့ကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်
အဆိုပါ Universal option ကို🙁ပေါ်လာပါဘူး
မာကို R. ဟုသူကပြောသည်
root လုပ်တဲ့အခါမှာ application ကိုဖျက်လိုက်ပြီလား။
Marco R. သို့ပြန်သွားရန်
angel Evangelioncool ဟုသူကပြောသည်
exploid အတွက် universal mode သည် ... download သို့မဟုတ်တစ်ခုခုမပေါ်လာဘူးလား။
Universal option သည်ပရိုဂရမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေဖြင့်လည်ပတ်သည့်အခါ၌ပင်မပေါ်ပါ။ ၎င်းသည် exploid window တွင်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမလုပ်၊ စတင်သည်၊ သို့သော်ထိုတွင်ရှိနေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးမှတ်ချက်တွေကဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘူးလို့ထင်လို့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ အာဂျင်တီးနားမှကျွန်ုပ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Defy +4days ago ရှိသည်။ ဒီခမ်းနားလှတဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာ Root User ပါ။ အဆင်ပြေတယ် !!!
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!!! ၎င်းသည် rooting manual နှင့် unlocking manual နှစ်ခုလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
galaxy onlock ကကျွန်ုပ်အားအခြားအလုပ်များလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် busybox installer ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်။ မရပါ။
မင်းမှာဘယ် terminal ပုံစံရှိပါသလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်“ motorola spice key” ဆဲလ်ဖုန်းရှိပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အမြစ်တွယ်ချင်တယ်။ ၎င်းကိုတင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည့်ပရိုဂရမ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရသည် - » sd ကဒ်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ၊ vuekva သည် SD ကဒ်ကိုသက်ဝင်သည်အထိလုပ်ဆောင်သည်။
အရာအားလုံးငါ့အဘို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
ကြွယ်ဝသော ramone ဟုသူကပြောသည်
မင်းမှာဘာဆဲလ်ဖုန်းရှိသလဲ ငါ့မှာ neo ရှိတယ်၊ ငါအခုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါဆက်လုပ်နေရင် program ကိုပိတ်ထားတယ် was
Rich Ramone အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်း (experia arc s) နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစား (samsung galaxy S2) ကိုအက်မင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်။ မည်သည့်အရာကမျှအဆင့် ၇ တွင်ခွဲဝေမှုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဘယ်လို Android ဗားရှင်းရှိသလဲ။
USB debugging ကိုသင် activate လုပ်ပြီးပြီလား။
အသီးသီး Version 4.0.4 နှင့် 4.0.3 ငါ debugging mode ကို check လုပ်ထားပါပြီ
Ice Cream အတွက်အထောက်အကူပြုတယ်လို့မထင်ဘူး
ထည့်ရန်ရွေးချယ်စရာကားအဘယ်နည်း။ auto, psneuter or zerg Rush ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ universal option သည်မရှိဘူး !!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုရမ်မည်သို့လည်ပတ်နေသည်ကိုကောင်းစွာမသိပါ၊ သို့သော်သင်နားလည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည့်အခြားအသုံးပြုသူများအားသင်အဖြေပေးသည်ကိုသင်တွေ့မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် root သို့မဟုတ် unroot လုပ်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တွင်ပြသနာရှိကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်မှာ၎င်းသည်တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ပါ၊ ဘာမျှမလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Samsung ကဲ့သို့သောအခြား Samsung ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သငျသညျကြိုတင်မှာအလွန်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်၊
samsung galaxy mini, တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်တုန်းကဒီလိုခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်ပြီးအခက်အခဲမရှိတဲ့အလားတူမိုဘိုင်းကိုငါနိုင်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါထပ်လုပ်ဖို့အန္တာရယ်ရှိခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ရှိ, crack ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
matias mar သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ g s-i9003 gingerbread, firmware version 2.3.6, windows764bits နှင့် windows6XNUMXbits ရှိသည့် gt-iXNUMX Galaxy S scl ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့် ၆ တွင်ကျွန်ုပ်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
usb debugging ကိုသက်ဝင်ကြောင်းပထမ ဦး စွာစစ်ဆေးပါ၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင် SuperOneclick ကို run ပါ။
၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်တင်ဆောင်လာသော Android ဗားရှင်းသည်သင်၏ဖုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟယ်လို!! ငါ့မှာ Galaxy-S + (GTI 9001) ရှိတယ်၊ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ငါ့ terminal ကိုအမြစ်တွယ်သွားတယ်။ အားလုံးပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတဲ့အခါဖုန်းကအရင်ကထက်အများကြီးနှေးနေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့် "menu" ခလုတ်တွေနဲ့ "back" နဲ့ပါ။ "... သူတို့ကိုငါနှိပ်ပြီးသူတို့ကတုန့်ပြန်ရန် ၁ စက္ကန့်မှ ၂ စက္ကန့်ခန့်ကြာမည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဆိုရွေ့လျားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အားရွေ့လျားနိုင်စေရန် ၃ သို့မဟုတ် ၄ စက္ကန့်လောက်ကျွန်ုပ်လက်ချောင်းကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ထားရမည်။ ပြtheနာဖြစ်နိုင်သလဲ ၎င်းကို rom သို့မဟုတ်တစ်ခုခုထည့်သွင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ!!
ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုသင်တပ်ဆင်ထားလား။
မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ၊ အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် UnRoot တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးထပ်မံကြိုးစားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင် UnRoot ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ ... ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး။
Arturo_jose ၃ ဟုသူကပြောသည်
အပေါ်ကပုံမှာလိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါနှစ်ခုပဲရတယ်။ * k နဲ့ပါတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျအနည်းငယ်နဲ့သူတို့ဟာကျရှုံးမှုဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ပရိုဂရမ်ကိုတုံ့ပြန်ပါဘူး
အဖြေ ... ??
ကျွန်ုပ်၏စက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် superuser application ကိုမရပါ။
မင်းမှာဘယ်ဆိပ်ကမ်းရှိပါသလဲ SuperOneClick ဖန်သားပြင်သည်အမှားတစ်ခုကိုတင်ပြသလား။
ဟယ်လို။ ဟေးငါမေးခွန်းတစ်ခုရတယ် ငါ့မှာ Xperia Neo ရှိတယ်။ အဆင့် ၅ မှာ program ကတုံ့ပြန်တာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ
Terminal အားလုံးသည်သဟဇာတမဖြစ်နိူင်ပါ။ ၎င်းသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်တွင်ရှိသည့် firmware သို့မဟုတ် Android version ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Cazorla ၇၄ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ samsung i9003 ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အမြစ်တွယ်စွာပြproblemsနာမရှိဘဲအမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ rom lol ပြောင်းရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ရွိုင်း O'Bannon ဟုသူကပြောသည်
Roy O'Bannon အားပြန်ပြောပါ
ဘယ်အချိန်မှာ Adb server ကိုသတ်တာလဲ၊
ညာဘက်အခြမ်း daemon အပေါ်မပြေး။ port 5037 မှာစတင်ပြီး daemon အောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့တယ်
Magellan A ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် SuperUser ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးအထိ application အားလုံး၏စာရင်းထဲမှတစ်စုံတစ်ခုမရရှိမှီတိုင်အောင်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်
Magellan A အားပြန်ကြားပါ
သင် superuser အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော application များကို download လုပ်ရပါမည်။ စျေးကွက်ထဲတွင် root နှင့်ကြည့်ပါ၊ သင်ဘာပြောင်းလဲလဲဆိုတာသတိထားပါ။ ကျွန်ုပ်အရာများစွာကိုပြုပြင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအဆင်မပြေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ငါ format လုပ်ရတယ် .. ဒါပေမယ့်ငါအခု 2.3 android install လုပ်။ , ငါ 2.1 ရှိခဲ့ပါတယ်။ အေးမြသွားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုမထိဘူး x သံသယ .. ငါအင်တာနက်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ငါပြု၏ .. မီတာကြောင့် flashing x 250 pesos အားသွင်းချင်တယ်။ တောင်မှမကပ်ပါ။
Mario Barrera နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Galaxy S3 ရှိတယ်။ အဆင့်တွေကိုအတူတူ root လုပ်ချင်တယ်၊ ငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဆဲလ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ငါကြောက်ရွံ့နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစတိုးဆိုင်ကလာယူလာတယ်၊ ငါထုပ်ပိုးနေတုန်းပဲ။ ပျက်သွားနိုင်တယ်
Mario Barrera အားပြန်ပြောပါ
စျေးကွက်အတွင်းရှိ superuser ကိုရှာရန်အလုံအလောက်ရှိပါသည်။ root permissions လိုအပ်သော application များကိုဂရုစိုက်ပါ။
6/8/12 - ငါ xperia x10a- ကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားမှဖြစ်သည်။ နှင့်အစီအစဉ်ကိုမီတာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ auto, psneuter (သို့) zerg rush လို့ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးယောက်လုံးစမ်းကြည့်ပါ။ ကားကအလုပ်မလုပ်ဘူး ငါ psneuter သုံးတယ် .. အဆင့် ၅ မှာ zerg Rush ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြီးပြည့်စုံတယ် .. cel ကိုအချိန်တိုင်း restart လုပ်ဖို့သတိရပါ။ root လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကို install လုပ်တယ်၊ သူတို့ကတိတ်တဆိတ်သုံးပြီးမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။ ငါ့ဆဲလ်ကငါအသုံးမပြုတဲ့တရုတ်ကီးဘုတ်လိုပဲ။ ဒါကမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ကပြီးပြည့်စုံတယ်။
ကျွန်တော့် Facebook က pablolp85@hotmail.com
ဟုတ်တယ်။ မီတာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမူကားငါအရာအများကြီးတပ်ဆင်ပြီးပြုပြင်မွမ်းမံစတင်ခဲ့သည်။ Superuser ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ပရိုဂရမ်သည်စျေးကွက်နှင့်တူညီသည်။ ငါ root toolbox ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ ငါ system format ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ reboot လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါ system ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းနဲ့ startup and rebooting ကိုပြောင်းချင်တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးမထည့်ခဲ့ဘူး .. ၎င်းသည် sony ericsson ဖန်သားပြင်တွင်သာရှိနေခဲ့သည် .. ထို့ကြောင့်၎င်းကို flash နှင့် android 2.1 ကိုပြန်လည် install လုပ်ရန်လိုအပ်သည် .. ၎င်းသည်ဆဲလ်တစ်ခုလုံးကိုပုံစံချသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါနောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်တယ် .. ပြီးတော့ငါအရာအားလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ကွယ်ကနေတိတ်တဆိတ်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခုငါ android 2.3 ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ အမြစ်နှင့်မပြုပြင်ဘဲသင်အသုံးမပြုသည်ကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ဥပမာတရုတ်ကီးဘုတ်သည်နေရာတော်တော်များများယူပြီးသင်လိုအပ်သည်ဟုမထင်ပါ။ သင်သည်ဆဲလ်၏မှတ်ဉာဏ်မှ applications များကို SD Card ထဲသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းမှာအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်သင်သံသယဝင်လျှင် graphical interface ကိုမပြောင်းပါနှင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Xperia X8 ရှိတယ်၊ auto, psneuter or zerg ကိုထည့်တဲ့အခါပရိုဂရမ်က Rush က run နေတဲ့ daemon ကနေမထွက်ပါဘူး။ port 5037 မှာစတင်ပြီး daemon အောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့တယ်
နှင့် SuperOneClick တုန့်ပြန်မှုမရှိ ... ငါ့ကိုသင်ကူညီနိုင်သလား
ငါ့ရဲ့ m ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ shell root .. `fiddle 'ဟုပြောသောအရာကိုထိပါ။ ဆဲလ်တွင်ဘာမျှဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်မလုပ်ပါက psneuter မှ zerg သို့ပြောင်းပါ။
ငါဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူက 64 bit system နဲ့သဟဇာတမပေးကြောင်းပြောတယ်။ ငါ Windows7Professional ကိုသုံးတယ်၊ ပြီးတော့ RAM က 3GB ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်4GB Patch ကို download လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တူညီသောအမှားတစ်ခုကိုဆက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် RAM သည်3GB ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါမူကားမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
Look Maria၊ သင်၏ပရိုဆက်ဆာသည် 64 bits ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ် ၃၂ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ pc သည်အတော်အဆင်ပြေသည်။ 32-bits နှင့်လိုက်ဖက်သောဤပရိုဂရမ်၏ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်ကြိုးစားပါ။ နှုတ်ခွန်းဆက်သလားဆိုတာမသိရဘူး
Gustavo Sotomayor ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!! ငါ့ Galaxy Tab ကိုအမြစ်တွယ်လိုက်တယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ် !!
Gustavo Sotomayor အားစာပြန်ပါ
ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် nod ၃၂ ကိုခြိမ်းခြောက်မှုများစွာအဖြစ်တွေ့ရှိပြီး ၄ င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုသီးခြားထားရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မော်တာရိုလာကိုဆန့်ကျင်။ ၂ ပတ်ကြာအရူးကဲ့သို့စတင်လွင့်စင်ခဲ့သော်လည်းမလှည့်နိုင်ပါ။ 🙁
နဂါးငွေ့တန်း3ဟုသူကပြောသည်
galaxy3ကိုစာပြန်ပါ
xperia x10 mini ကို !!
အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းသည်ဗလာဖြစ်သည်။ root လိုအပ်ချက်နှင့်အတူမည်သည့်အရာကိုမဆို install လုပ်နေဆဲဖြစ်သည် !! ဂိမ်းစသည်ကဲ့သို့သော default applications များကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။ ငါမရခဲ့ဘူး !!
Agustin Romero လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ငါ Samsung ကို galaxy S နဲ့အခန်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့သတိပေးချက် ၃ ခုလိုပရိုဂရမ်ကိုစလိုက်တဲ့အခါ၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအမြစ်တွယ်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ်ပရိုဂရမ်ကဖမ်းမိပြီ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့စလိုက်ပြီ။ အရာတွေဟာပရိုဂရမ်ရဲ့ဖန်သားပြင်နှစ်ခုလုံးမှာပေါ်နေပေမဲ့အဆုံးသတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီခွင့်ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန် root ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်
Agustin Romero Lopez အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို။ သူသည်အဆင့် (၇) သို့ ရောက်၍ ပျက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် S7 SGH - I2 Skyrocket AT&T ဗားရှင်း 777 ရှိသည်။ android ကနေ။ အဲဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကတော့ Wi-Fi ကိုဝေမျှတာပါပဲဒါပေမယ့်စက်ရုံကနေပိတ်တာပါ။ ကူညီကြပါ။
Play Store မှ Wifi မျှဝေရန်လျှောက်ထားလိုပါသလား။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ LG P708g ရှိတယ်။ မက္ကဆီကိုအတွက် 8 megapixels ကင်မရာနဲ့ထွက်လာတယ်။ အမြစ်ကိုအမြစ်ဖြတ်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ငါအရမ်းကြိုးစားနေတယ်။ ဒီ option ကိုငါကြိုးစားပြီး၊ ညာဖက်မှာပြတင်းပေါက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့် ၅ မှာကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပို့ကုန် TEMPRANDOM = 5; တင်ပို့ PS36271 = END: $ TEMPRANDOM; ./ zergRush
/ system / bin / sh: ./zergRush: မတွေ့ပါ
PS36271 = »»ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအဆုံး၊
ဒီ terminal ကို root လုပ်ဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြပါ
ငါ့မှာ Galaxy S2 ရှိတယ်၊ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့အမြစ်တွယ်ရင်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် modes များအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးလေ့လာခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ကိုအမြစ်မကျစေပါ။ android 10 နှင့်အတူ xperia x20 mini pro u2.1a ရှိသည် 1 -.A pdate 2.1.1 compilation 0.6.A.5 ။ ပထမစာကြောင်းတွင် root ကိုနှိပ်ပါက * server မ run သော * message မှအောက်ခြေ * daemon တွင်မတွေ့ပါ။ ၎င်းကို port XNUMX တွင်ယခုစတင်ပါ။ system / xbin နှင့် system / bin တို့တွင်ဖိုင်အချို့မတွေ့ရပုံရသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲငါတကယ်မသိဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။
Unloock Root ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးပြီလား။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကို Relovi ကကျွန်ုပ်သည် SuperOneClick ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အခြားတစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်နှင့်ကောင်းစွာလည်ပတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပျက်စီးသွားပုံရသည် (သို့) ၎င်းပါဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဟိုင်းဂျော့ခ်ျ၊ ငါမှာလည်းထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်။ ဘယ်ပရိုဂရမ်ရဲ့ဗားရှင်းကိုမင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သလဲ။
ငါဗားရှင်း 2.3.3 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်အမှန်တရားအံ့သြစရာပါပဲ။
အံ့သြစရာကောင်းတာကငါ့မှာ dual sim Zonda 900 ရှိတယ်၊ ငါ "အော်တို" mode ကိုအသုံးပြုတယ်၊ ဒရိုင်ဘာတွေကသူတို့မှာမရှိဘူး၊ တူညီတဲ့ပရိုဂရမ်ကယေဘူယျထည့်သွင်းဖို့ရွေးစရာပေးတယ်၊ အစပိုင်းမှာငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်၊ ကားမောင်းသူမှာလက်မှတ်မရှိဘူး၊ နောက်ထပ်သတိပေးချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့အမြစ်တွယ်သွားတယ်၊ ၂ မိနစ်ကြာပြီးကျွန်တော် ၁၀၀ ရှိခဲ့တယ်
Avila အဲရစ် ဟုသူကပြောသည်
4g အလုပ်လုပ်ပြီး htc inspire 100% GRaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Avila Erick အားပြန်ပြောပါ
ကီဗင် 9230 ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းကမင်းကိုမင်အမြစ်မပေးနိုင်တာကြောင့်နင်ကကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကိုနှိပ်ပြီး inspire col el superone ကို rooter လုပ်နိုင်တယ်
ကီဗင် 9230 ကို reply
Alexo bedoya ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမှာပြhaveနာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကိုအမြစ်တွယ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာကိုငါကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာမျှသို့မဟုတ်ဤရွေးချယ်မှုဖြင့်
ငါရရှိသောအမှားသည် run နေခြင်းမရှိ၊ shell false root ကိုစစ်ဆေးသည်… false and shelling rooting devide အဆင့် ၄ ပျက်ကွက်ထားသော set pro mask
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအဖြေပေးနိုင်လျှင်ငါ့အဆဲလ်ဖုန်း lg optimus အနက်ရောင်သည်ဆိုပါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်
sw ဗားရှင်း LG-p970-v20v
အရေအတွက်က grj22 တည်ဆောက်
kernel ကိုဗားရှင်း 2.6.35
alexo bedoya သို့ပြန်သွားရန်
ပရိုဂရမ်ကကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုအဖြေမပေးဘူးလို့ပြောတယ် manus93@live.com.ar အကယ်၍ မင်းကငါ့ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုလျှင်ငါလှည့်ချင်တယ်၊ ငါမှာ Samsung Galaxy နဲ့ Pro 2.3 ရှိတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ် (samsung galaxy young) ကို Unloock Root နှင့်၎င်းအောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း root လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုလမ်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမသိရ
ယူရီ ၁၉၇၂ ဟုသူကပြောသည်
အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ Anti-Virus ကို Disable လုပ်ခြင်းပဲ၊ Exploit file တွေကို quarantine ထဲကိုယူသွားလိုက်တယ်။
ဥရိ 1972 အားပြန်ကြား
ငါ Automatic ကိုသွင်းလိုက်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာပိတ်ထားရမယ်၊ နောက်ဆုံးတော့အော်ပရေတာကပေးတဲ့စမ်းချောင်းပလီကေးရှင်းတွေကိုငါ uninstall လုပ်နိုင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်မှာ xperia x8 ရှိပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမြစ်တွယ်တဲ့အခါမှာတုန့်ပြန်မှုမရှိပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ xperia arc s ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သော့ဖွင့်လို့ရသလားသို့မဟုတ်ပေးဆောင်ဖို့လိုပါသလား။ ၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ရန်ညွှန်ကြားချက်များဘယ်မှာရှိသနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် Galasy S i897 ရှိပြီး၎င်းသည်အမြစ်တွယ်လာသောအခါတုံ့ပြန်မှုမရှိသောကြောင့်ဘာမျှမလုပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား ??
ဟဲလိုဝဲလ် (HUAWEI CM980 EVOLUTION 2) အမြစ်တွယ်နည်းမည် ?????
jose paz အားပြန်လည်ဖြေရှင်းပါ
ငါ debugging mode မှာထား, ငါ superoneclick ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမပရိုဂရမ်ထဲမှာအဘယ်သူမျှမစကားလုံးများ, စာရင်းတွင်ပေါ်လာသည်။ ဒါဆိုငါအခုဘာလုပ်လဲ
ahh, ငါပြီးသား lol, သူ့ဟာသူဖွင့်ဖြည့်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် "Missing Driver!" ကိုအမြစ်တွယ်သောအခါအချို့သောဒရိုင်ဘာများကိုမတပ်ဆင်ထားဟုဆိုသည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်သင့်သည်ဆိုသောအချက်ကိုသိလိုခဲ့သည်။
ဒါကခြေလှမ်း ၂ မှာငါ့ကိုကပ်ထားတယ်၊ ငါမှာ Samsung Galaxy galaxy fit တစ်ခုပါ
Gustavo Diaz Lome ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနံနက်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ XPERIA P ရှိသည်။ ခြေလှမ်းများသည်နံပါတ် ၇ ရက်တွင်ရပ်တန့်သွားသည်။ ၎င်းသည်အိုင်ကွန်မှလိုက်မသွားပါ၊ ၎င်းသည်အိုင်ပက်ဒ်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိသလောက်နည်းတူ OR TEAM လည်းမဟုတ်ပါ။ သဟဇာတမဟုတ်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gustavo Díaz Lome အားစာပြန်ပါ
Unlock root message ကိုရှာပြီးအဲဒီနည်းလမ်းကိုစမ်းကြည့်ပါ
အလှအပနှင့်ဥာဏ်ပညာ N_n ဟုသူကပြောသည်
အမြစ်မရှိ ငါကွဲပြားခြားနားတဲ့ပရိုဂရမ် ၃ ခုကိုကြိုးစားပြီးပြီ။ အဲဒါက "အဲဒီလိုဖိုင်မျိုးမတွေ့ရဘူး" ဆိုတော့ busybox နဲ့ superuser ကိုမတပ်ဆင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ကြောင်း၏အကြောင်းရင်းကဘာလဲ ??? ငါ Motorola အမွှေးအကြိုင် xt3 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Beauty And Wisdom N_n ကိုပြန်လည်ပြောပြပါ
မေးလ်ကစိတ်မကောင်းပါဘူး beauty.and.wisdom.n_n@hotmail.com ...
Sallovirama ၁၁ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy Mini ရှိပြီး Super One Click ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သူက administrator ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး USB debugging ကိုသက်ဝင်စေပါတယ်။ ကျွန်တော် root လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်မှာသာတွေ့နိုင်သည်။ adb server ကိုသတ်ခြင်းနှင့် adb server အောက်စတင်ခြင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
လက်ျာဘက်၌: Daemon မပြေး။ port 5037 နှင့်အောက်တွင်စတင်ခြင်း: Daemon သည်အောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့သည်
Jaime Santillánချားဗေ့စ် ဟုသူကပြောသည်
samsung KIES ကို install လုပ်ပါ
ကောင်းပြီ, ပြီးသားတတျနိုငျသ kies ကို install လုပ်ပါ
ဖာနန်ဒို Araya ဟုသူကပြောသည်
win7 မှာ administrator ပြproblemsနာတွေအမြဲရှိတယ်
ဖာနန်ဒို Araya အားတုံ့ပြန်ပါ
ယေဘုယျအားဖြင့် run ရန်အတွက် superoneclick မှဖိုင်အချို့ကိုဖျက်ပစ်သောကြောင့်သင် anti-virus ကိုဖြုတ်ထားရန်လိုသည်
မင်္ဂလာပါ။ အကယ်၍ Samsun အစား Motorola Difay လား။ ငါ mv525 ရှိတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy Mini ရှိတယ်၊ Super One Click ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူက administrator ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး USB debugging ကိုသက်ဝင်စေပါတယ်။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် - adb server ကိုသတ်ခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်တော့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီပေးပါ။
Perfect XD ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တက်ဘလက်ကိုမည်မျှ root လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်မသိပါ
ဟီဆန်ကိုကို၊ ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် android2နှင့်အတူ samsung galaxy tab 7.0 4.0.3 စုစည်းထားသည့် p3100buald5 ရှိပါသည်။ စုစည်းမှုအကြောင်းကိုသင်တို့အားပြောပြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ root ulnlock post ကိုကျွန်တော်မြင်သောအခါ၊ ထို model ကိုလိုက်ဖက်တဲ့စာရင်းတွင်မရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းသည်ဤပရိုဂရမ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကားကိုရွေး။ အမြစ်ပေးသောအခါကျွန်ုပ်အားဒရိုင်ဘာများအကြောင်းပြောပြသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရရှိပြီးသောအခါ“ ဤစက်အတွက် android ADB Interface Driver ကိုကျွန်ုပ်အားအပြင်းအထန်တပ်ဆင်လိုပါသလား။ ငါ NO ကိုပေးထားပြီးပရိုဂရမ်သည်အဆင့် (၇) တွင်ချိတ်ထားသည်။ easyoneclick ကိုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ပုံစံမထွက်လာရင်တောင် unlock root ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာတွေထူးလဲ!!! ငါ့မှာ zonda ZMCK 900 ရှိတယ်၊ android 2.3.5 ရှိတယ်။ ဒီ application ကလှည့်ပတ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်သလား။
SUPERONECLICK အစီအစဉ်တွင် UNIVERSAL ကပြောသော NO box မရှိပါ။
ဒီယေဂို နာဗာ ဟုသူကပြောသည်
wey ငါဒီနှင့်အတူ fart ကြောင်းတုံ့ပြန်မထားဘူးကြောင်းရ ?????
diego nava အားပြန်ကြားပါ
ဖရန့်ကလင် ဆာဗာဒရာ ဟုသူကပြောသည်
android 2.3.3 နဲ့ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံကစားတာအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
franklin saavedra အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သားရဲကိုလှူဒါန်းချင်သလားဟုမေးမြန်းသည်။
Andiee shinoda ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်သို့သော်၎င်းသည် viruuus ဟုပြောသည်။
Andiee Shinoda ကိုပြန်သွားပါ
19/01/2013 21:06 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါလမ်းလျှောက်, THE SUPERUSER အိုင်ကွန် CELU တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်
တရုတ် XL ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ LG Optimus L7, android ice cream sandwish 4.0.3 operating system ရှိတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့အမြစ်တွယ်နိုင်တယ်ထင်သလား။ ငါနာမည်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး၊ နောက်တစ်ခုနဲ့ကြိုးစားပြီးပြီ။ ငါ့ညီငယ်ကဖုန်းကိုစက်ရုံပြင်ဆင်မှုလုပ်ပြီးကတည်းကအဲဒီ SIM ကဒ်ပြwithနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလားသိချင်တယ်။ သူကဆင်းမ်ကတ်နှင့်ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသည့်လိပ်စာများစသည်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကအချက်ပြခြင်းမရှိပဲ ၀ န်ဆောင်မှုမရှိဘဲပြောပါသည်။ သို့သော်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ပေးပို့ခြင်းမပြုသည့်အချိန်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိသောသို့မဟုတ်အချက်ပြမှုမရှိသော SMS ကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိပါသည်။ 3g အင်တာနက်ကကျွန်တော့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်တယ်။ ဒါကထူးဆန်းတာပဲ။ နေရာတိုင်းမှာအဖြေရှာဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကိုထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ငါပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာကိုမျှဝေမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်
Motorola xt389 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်မည်သူမဆိုသိကြပါသလား ??????
Edward Avila ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်တရုတ်ဆဲလ်ဖုန်း INCO A606 တွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယာဉ်မောင်းကဒီကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ http://www.4shared.com/rar/0MvyztbR/usb_driver_MT65xx_Android_ZTE_.html?cau2=403tNull
Eduardo Avila အားပြန်ပြောပါ
Manuel Alejandro Jimenez Garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာဆဲလ်ဖုန်းအတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအမြစ်တွယ်တဲ့အခါဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ စူပါအသုံးပြုသူကထည့်သွင်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။
Manuel Alejandro Jimenez Garci သို့ပြန်ပို့ပါ
Alexiitha Gamarra Montestruque ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Motorola Motosmart XT389 နဲ့အလုပ်လုပ်လားသိလား ???
Alexiitha Gamarra Montestruque အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာထိတွေ့ 4g ရေခဲမြစ်တစ်ခုရှိပြီး htc ငါ့မှာဝက်သားမရှိဘူး
Kiliing ADB နှင့် root ကိုပြန်လည်စတင်ပါ ... ပျော်မွေ့ပါ။ ထိုမှဘာမှမဖြစ်၊ ငါနာရီဝက်ခန့်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။ ငါဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ပြန်လည်စတင်ပြီး superuser ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် superuser application ကိုမရခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ busybox ကိုမဖွင့်ဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Vodafone smart7tablet ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲပြောပြနိုင်မလား
Martinez Contreras Bryan Jorge ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် motorola ex 389 တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကျင့်သုံးရမည်နည်း
Martinez Contreras Bryan Jorge အားစာပြန်ပါ
Mike parra ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ gingerbread 5510 နှင့်အတူ samsung i2.3.6 ရှိတယ်။ အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုပေမယ့် superuser မှဘာမှမပေါ်လာ ... app မရှိပါ။
Mike Parra အားပြန်ပြောပါ
ငါ Root ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာပေးတဲ့အခါမှာသူကပရိုဂရမ်ကမတုန့်ပြန်ဘူး၊ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီးတူညီသောအရာတိုင်းငါ့ကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ငါ၌ Windows7ရှိပြီး Framework ဗားရှင်း ၁.၁ ရှိသည်။ ထိုကြောင့်သင်ထင်သလော ဗားရှင်း ၂.၀ ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Windows ကို update ကိုမှ
13/01/2013 14:10 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Luchi မီးတောက် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေအလိုအလျောက် box ထဲမှာပေါ်လာသည်နှင့် desckopt.ini ပေါ်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်ဤသို့အမြစ်တွယ်မိသော်လည်းအမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး unzipped ဖိုင်တွဲကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ , သင်မသိဘဲလူတစ် ဦး ကူညီပေးခဲ့သည်: D !!
Luchi Flomen ကိုပြန်ကြားပါ
ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ ငါတစ်နာရီရှိခဲ့ပြီ၊ ဒါကမတိုးတက်ဘူး ငါဖမ်းယူထဲမှာပေါ်လာသောပထမ ဦး ဆုံးအရာနှစ်ခုရှိသည်
ကျွန်ုပ်တွင် Glaxy ACE S5830i ရှိပြီးနေရာပြproblemsနာများကြောင့်အမြစ်တွယ်နေရန်လိုအပ်ပါသည်။ SuperOneClick ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားလျှင်၊
Shell rooting device: အဆင့် ၇ ။ ။ ဖုန်းကိုစောင့်ပါ
ထိုတွင်၎င်းသည်တုန့်ပြန်မှုမရှိဟု ထပ်မံ၍ တိုးတက်မှုမရှိဟုဆိုပါသည်
UnlockRoot ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ https://www.androidsis.com/unlockroot-herramienta-para-rootear-un-buen-numero-de-dispositivos/
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များကိုရွေးချယ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ debugging option ကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး firewall ကိုမဆို disable လုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ပြီး၎င်းသည် samsung galaxy tab27.0 android နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက ၄.၀.၃ အလုပ်လုပ်သည်၊ မသိသည်ကိုကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်ပါသည်။
ငါ့ Motorola xt316 ပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး
အိန်ဂျယ် vasquez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် Samung Kies ထည့်သွင်းထားသော်လည်း OK မရှိသေးပါ။
ငါ့မှာ Galaxy Ace ရှိတယ်။
ငါ END နှင့်အခြားဘာမျှမရ
Angel Vasquez အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ Samsung Galaxy Ace တိုးတက်တဲ့ version ရှိတယ်။
ငါ Super One ကို install လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ် USB Debugging ကို enable လုပ်ပါတယ်။
ငါ Samsung Kies ကို install လုပ်ရှိသည်။
Cheking Shell နဲ့ Checking Root ထဲမှာအရာအားလုံးကိုငါထားတယ်။ ငါမှားတယ်။
ငါနောက်ဆုံး END ရပေမယ့်ပြန်စတာဒါမှမဟုတ်ဘာမှမပါဘူး
Illa Morwen Númenessëဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ superoneclick ကို download လုပ်လို့မရပါဘူး
Illa Morwen Númenessëအားစာပြန်ပါ
ငါကီးဘုတ်ပေါ်လာပါဘူးငါမက်ဆေ့ခ်ျများမရေးနိုင်, ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျးကိုငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမသိ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် fsanchez923@hotmail.com
ဘယ် terminal အမျိုးအစားရှိပါသလဲ။
တောင်းပန်ပါတယ်။ Android A606, သော့ခလောက်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မပေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကူညီကြပါ
Danaje Yaret ယေရှု ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုဟေး၊ ကျွန်ုပ်၏ cel inco A606 android version 4.0.4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီး root ခွင့်ပြုချက်မပေးလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
Danaje Yaret Jesus အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် Samsung galaxy captivate တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကို kies နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခက်အခဲများရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစူပါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လျှင် kies နှင့်စမ်းကြည့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာများသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်သူမျှမငါ၏အ firmware ကိုဗားရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်ငါဘာလုပ်ရမှန်း ... ?
ငါ့မှာ xperia x8 ရှိတယ်။ ငါ Daemon ကိုသာအလုပ်မလုပ်ဘူး ယခုအခါ port 5037 နှင့်အောက်တွင်စတင်သည်: Daemon သည် AUTO ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကအောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့သည်။ ဖြေရှင်းနည်းလား
Faabiruchis RaaygoZa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် lanix ilium s50 ကျွန်ုပ်မည်သို့အမြစ်တွယ်။ အခမဲ့အင်တာနက်ကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်နှင့်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။
Faabiruchis RaaygoZa အားပြန်ပြောပါ
သငျသညျအကြှနျုပျကိုသိပါသလား supreuser ငါ့ထံသို့ပုံပေါ်ပါက superuser ကဲ့သို့တူညီသည်?
ဒါပေမယ့် superuser ကိုဘယ်မှာရသလဲ root button ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါဟုတ်တယ်၊ 123342 codes တွေကိုထွက်လာပေမဲ့ငါအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်။ ငါဟာ super user တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဘာမှမရှိဘူး၊ က de Applications ကို၏အံဆွဲ ?? ငါဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ သင်အဲဒီခြေလှမ်းကိုအခြားနည်းနဲ့ရှင်းပြနိုင်မလား။
ငါမှာ Samsung အတွက်အလုပ်လုပ်သင့်တယ် gsn galaxy mini ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
သငျသညျရေခဲမုန့် sandwickh ဗားရှင်း၌ရှိကြ၏လျှင်ပင်
ခရစ်စတီယာန် CR ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် samsung galaxy ace pus s7500l ရှိပြီး၎င်းစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား
Cristian CR အားပြန်ကြားပါ
ဟယ်လို! galaxy scl gt i9300 ကို win.vista ဖြင့် superoneclick ဖြင့်အမြစ်တွယ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ kies၊ superuser app နှင့်မူဘောင်တို့က superoneclick သည်ငါ့ကိုဖမ်းဆီးပြီး“ တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိ” စေသည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုငါစွန့်ခွာလိုက်သည်။ အချိန်ကောင်းကိုမရောက်စေခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောအပိုင်း၌ထည့်သွင်းခြင်းမရှိသောအမှား Error 8mil nosecuantos .. သင်ငါ့ကိုတစ်ခုခုအကြံပြုပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
motorola xt389 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေမရှိသည်
ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းအတွက်လိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများသာလိုအပ်သည်။ mobilenet မှ ustarcom adr 2100 ကို root လုပ်နိုင်သည်။
ရော်ဂျာ diaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ့သူငယ်ချင်း၊ ငါစာမျက်နှာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ့မှာ Huawei Ascend Y200 ရှိတယ်
Roger Diaz အားပြန်ပြောပါ
Diego Lozano Páez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်မှာ ZTE SKATE ရှိတယ်။ တခြားလူလိုမျိုး superuser ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီပရိုဂရမ်ကငါ့ရဲ့မိုဘိုင်းလ်ကို root လုပ်ဖို့လား။ နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်ပါ
Diego Lozano Paez အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြစ်အရင်းရှိဖို့လိုပါမယ်။ ငါ shanana မှာဖတ်ပြီးဖတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ငှက်ပျောတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ကူးတော့မယ်။ ငါမှာတရုတ် cel 4.0 kernel 2.3 ရှိတယ်။ ငါနဲ့အတူဒီမိုဘိုင်း helpsaaaaaa ကိုငါ root လုပ်လိုက်တယ်။ လုံခြုံအောင်ကြိုးစားပါ၊ သူငါ့ကိုပစ်လိုက်တာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ၏အ LG e400 root ဖို့ဘယ်လို
ဟိုဆေးလူးဝစ် Robles ကားလို့စ် ဟုသူကပြောသည်
နှင့်၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။
အမှတ်တံဆိပ်: ekt ။
ဟိုဆေးလူးဝစ် Robles ကားလို့စ်ကိုပြန်ပြောပါ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၎င်းကိုအမြစ်တွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အရာရာတိုင်းရဲ့အစမှာအမြဲတမ်းအေးခဲနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပထမကငါ့ဆဲလ်ဖုန်းကယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ၎င်းသည် Alcatel One Touch T'POP 4010 ဖြစ်သည်
Sergio Suarez ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ကျွန်ုပ်၏ Zonda ZMCK900 ဆဲလ်ဖုန်းအမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်သည်။ ယခုသူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အဘယ် application များရရှိနိုင်ကြောင်းငါ့ကိုပြောပြရန်လိုအပ်သည်။ ငါ့ကိုလဲလှယ်ပေးသောပရိုဂရမ်အချို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ virtual နှင့်အလုပ်လုပ်သောသို့မဟုတ် internal memory ကိုတိုးချဲ့ရန် ... နှင့်သူတို့၏ယေဘုယျအားဖြင့်ပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများသည်၎င်းတို့ကိုအမြစ်တွယ်နေသောဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြပါကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာက Link2SD က application တွေကို SD memory ထဲကိုပို့ဖို့၊ internal memory ကိုစစ်ဆေးဖို့ DiskUsage၊ အများကြီးကြီးထွားလာပြီးမှတ်ဥာဏ်ကုန်သွားတဲ့ Root Explorer ပါ။ ငါ DiskUsage နှင့်အတူ check လုပ်ထားဖိုင်များကိုဖျက်နိုင်မှ
Carlos Andres ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
သူတို့က CacheMate ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်
Carlos Andres Hernandez အားပြန်ပြောပါ
SuperOneClick ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ DepositFile ကဖျက်ပြီးပါပြီ
Ami သည်အဆင့် ၇ သို့ရောက်သောအခါပရိုဂရမ်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ၊ ဘာမျှမလုပ်ပါဟုဆိုသည်။ တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများအားလုံးကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ မည်သည့်အရာကအမြဲတမ်းအမှားအယွင်းတစ်ခု (သို့) အချို့ရွေ့လျားမှုကိုပြောပါသည် ,,, TLF သည် LG ဖြစ်သည် L7 အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုကူညီပေးပါကသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏စာမှာ roberto_haze@hotmail.com
မင်္ဂလာပါ။ Xperia သွားအလုပ်လုပ်သလား။ ဒါဟာ adb သို့မဟုတ် st27 ထဲမှာယာဉ်မောင်းမရှိဘူးဆိုတာငါ့ကိုပြောပြတယ်။ သူတို့ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ။
မင်္ဂလာပါ sony ericsson wt19a အမြစ်တွယ်ပြီးတာနဲ့ network release code ကိုမည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ နင့်ကိုနည်းနည်းသင်ပေးစေချင်ပါတယ် ငါ့မှာ HTC Desire A8181 ရှိတယ်။ SuperOneClick ဖြင့် Root လုပ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုကျွန်ုပ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် SuperUser App ကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ရှာမတွေ့ပါ။
- အလိုအလျောက်ဗားရှင်းစစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပါ။ သင်၏ OS ဗားရှင်း ၂.၀ သို့မဟုတ်ပိုမြင့်ပါသလား။
-Device ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖတ်။ မရပါ။ (သင်၏စက်ကို reboot လုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်)
..I သူ့ကို Skip ကိုပေး၏
- အမြစ်ပိုစတာတစ်ခုပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်စာမေးပွဲဖြေလိုပါသလားဟုကျွန်ုပ်ဖြေပါ၊
.. ကျွန်ုပ်သည် Super User App ကိုရှာမတွေ့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ LG Optimus L9 P760 ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းထားသောဒရိုင်ဘာများအားလုံးကိုစတင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ROOT တွင်ပေးသော windows7စုစုပေါင်း starter ရှိသည်။ ၎င်းသည်အဆင့် # ၇ သို့ရောက်သောအခါရပ်လိုက်ပြီး၎င်းအစီအစဉ်သည်တုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ထိုတွင်ရှိနေမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
နောက်ဆုံးတော့ LG9 ကို root လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ကြည့်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာပြီးကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy နှင့် S5367 တီဗီတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်ဘာအကြံပြုသလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါမှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်၊ Kies သည်ကျွန်ုပ်ကိုထည့်သွင်းမထားဘူး (၎င်းသည်အခြားအရာများမတိုင်မီပိတ်လိမ့်မည်) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်မှတဆင့်ဘာမှမတွေ့ပါ (အက်ပလီကေးရှင်းများရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1.5.33.0.exe ကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်။ ) ကျွန်တော်အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး)
Jose Ignacio ဟုသူကပြောသည်
ယာဉ်မောင်းတွေအကြောင်းမင်းဘာမှမပြောဘူး။ မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် driver တွေမသွင်းခင် root လုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာငါနားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့် SuperOneClick နဲ့မလိုအပ်ဘူးလားဆိုတာမသေချာဘူး။
PS: ငါမှာ Xperia st26i ရှိတယ်
José Ignacio ကိုပြန်ပြောပါ။
Samsung Galaxy S နှင့် Samsung Galaxy SII တို့ကို Galaxy S Unlock ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
SopCast သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ Android တွင်အားကစားကိုကြည့်သည်